Egeree nageenya Somaaliyaafi tumsa 'IGAD'
Kufaatii mootummaa abba irree biyyattii, bulchiinsa Ziyaad Barreetii as nageenyi Somaaliyaa akka dhallaaduu bishaan keessaa oliifi gad raafamuu eegale.
Dimokraasiin biyyattiif buddeena abjuu ta'us bulchiinsa kana keessatti Somaaliyaan irree jabaa qabdi ture. Ta’us turtii sirna bulchiinsa waggoota 21 booda mootiin kun erga aangoorra fonqolchamee booda biyyattiin ALA bara 1991tti walwaraansa hamaa keessatti kufte.
Bara olitti eerame kanaa kaaseeti biyyattiitti saamichi, shororkeessummaan, jeequmsi siyaasaafi dinagdee hidda yaafachuu kaa eegale.
ALA Bara 2012tti seerri ture fooyyeffamee mootummaa federaalaa hundeessuun gargaarsa hawaasa addunyaatiin raafama kanarraa bayyaannachaa jirti. Har’as taanaan gartuun saamichaafi shororkaa kanneen biyyattiin akka mootummaa jabaa hinqabaatne fedhan dhiibbaa guddaa taasisaa jiru.
Keessumaa dhiyeenya kana boombii hoteela keessatti dhoosuun lubbuu namoota dhibbaan lakka’amaniifi qabeenya miliyoonatti tilmaamamu kan galaafate aleellaan Alshabaab nageenya biyyattiif sodaachisaadha.
Ta’us biyyattiin dorsisaafi dhiibbaa Alshabaabiif osoo hinjilbeeffatin nageenya Somaaliyaatiif furmaata waaraa fiduuf kutannoon ifaajaa jirti.
Kibxata darbe Aanga’oota mootummoota Afrikaa kan Misoomaa Waliinii/ 'IGAD' ijaarsa sirna federaalizimii Somaaliyaa workishooppii guyyoota sadiif ture tibbana Finfinneetti geggeesseera.
Workishooppii kanaanis Somaaliyaan sirna federaalizimii Itoophiyaafi Keeniyaarraa muuxannoo kan qooddattu taati. Ambaasaaddar Tawaldee Gabramasqal 'IGAD'tti daarektara nageenyaafi tasgabbiiti.
Akka isaan jedhanitti, biyyoota miseensa dhaabbatichaa keessatti dhimmootni bowwoo ta’an heddummina keessummeessuu dhabuu, hiyyummaa, hoji dhabdummaa dargaggootaafi gosoota qoodiinsa aangoofi qabeenyarraa moggaatti dhiibuudha. Kunis tilmaamaan kan kaa’ame osoo hintaane qorannoon kan adda ba’eedha.
Kanaaf ammoo akka mbaasaaddarichi jedhanitti, furmaatni guddaa sirna federaalizimii hundee jabaa qabu diriirsuudha. 'IGAD's sirna misooma cinatti sirna federaalizimii diriirsuurratti fuuleffatee hojjetaa jira.
Haaluma kanaan Somaaliyaa waraanaan bututte sirna kanaan bayyanachiisuuf hojjetaa jira. Sirna federaalizimii Somaaliyaan ALA bara 2012 ifatti hojiirra oolchite keessatti qoodni 'IGAD' olaanaa ture.
Fayyadamummaa qabeenyaafi aangoo haqa qabeessa sirna kanaan diriireen tasgabbiin nageenya biyyattii yeroodhaa gara yerootti fooyya’aa dhufeera. Dhiibbaan Alshabaabis naannolee heddutti daran dadhabeera.
Aadde Anjeliinaa Hoongoo Ministira Karooraafi Diivoluushinii Keeniyaati. Akka isaan jedhanitti, sirni bulchiinsa Keeniyaa qajeelfama federaalaa gara naannoleetti diriiru fayyadamummaa haqa qabeessaai walqixxummaa lammiilee dhugoomsuusaatiin sadarkaa addunyaatti fudhatama argateera.
Biyyattiin sirna bu’a qabeessa kana Somaaliyaatti akka hojiirra ooluuf tumsa taasisaa jirti. Ummatni Somaaliyaa kaleessa hacuuccaa sirna abbaa irree jala ture har’a hireesaa ofiin murteeffachuu danda’eera.
Barreessaan Ministeera Dhimma Alaa Somaaliyaa, Obbo Abdullaahii Mahaammadis tumsa hawaasni addunyaa isaaniif taasisaa jiruun biyyisaanii daandii nageenyaafi dimokiraasii dhandhamachuu akka eegalte himu.
Naannolee biyyattii hedduu to’annaasaa jala oolche kan ture Alshabaabis daran dadhabaa dhufeera. Ummatni yeroo kamuu caalaa dheebuu nageenyaaf qabu mul’isaa jira. Kun ammoo humna dhabuu dhaaba shororkeessaa kanaatiif sababa ta’eera. Ammas taanaan hojiin biyyattii gara caalutti ceesisuufi nagaeenya waaraa fidu haalaan hojjetamaa jira. Sochii kana keessattis gumaatni 'IGAD' olaanaadha.
Walumaagalatti, Somaaliyaan akka biyyaatti kufaatii sirna abbaa irree, Ziyaad Barree as raafama siyaasaa hamaa dabarsiteetti. Ammaan tana gargaarsa hawaasa addunyaa, keessummaa 'IGAD'n mootummaa ofii filattee ummata ofii hanga tokko bayyanachiisaa jirti.
Torban kana/This_Week 17533
Guyyaa mara/All_Days 1442313